मलेसिया रोजगारी छिट्टै खुल्नेमा विश्वस्त छु::Daily Newspaper of Nepal
मलेसिया रोजगारी छिट्टै खुल्नेमा विश्वस्त छु
राजदूत भएर साउदी अरेबियामा कार्यकाल सकिएपछि सरकारले उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाको राजदूत नियुक्त गर्यो । उनी मलेसियाको राजदूत भएको छ महिना बढी बितेको छ । यसबीचमा नेपाली कामदारलाई मलेसियामा रोजगारीको गतिरोध खुल्न सकेको छैन । यद्यपि यो महिनाबीच धेरै सुधारका काम भने भएका छन्् । विशेषगरी नेपाली कामदार मलेसिया लैजाने विषयमा दूतावासले पहल गरिरहेको छ । राजदूत पाण्डे मलेसियामा रोजगारी खुल्नेमा विश्वस्त छन् । यही सोमबार र मंगलबार नेपाल र मलेसियाबीच संयुक्त कार्यसमूहको बैठक बसेको छ । बैठकले गतिरोधको अन्त्य गर्ने उनको अपेक्षा छ । यसै सन्दर्भमा मलेसियामा रोजगारी र लगानीका विषयमा राजदूत पाण्डेसँगे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मलेसियामा राजदूत भएर आउनुभएको पनि लामो समय भयो । यस अवधिमा यहाँले देखिने गरी के कस्ता काम गर्नुभयो ?
म यहाँ आउँदा यहाँ धेरै समस्या थिए । धेरै वर्षदेखि कामदार पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको अवस्था थियो, अहिले पनि जारी छ । अब त्यसलाई पुनः सुरु गर्नेतर्फ काम भइरहेको छ । भिसाको म्याद सकिएका नेपाली कामदारको संख्या ठूलो छ । यिनलाई घर फर्काउने काम दूतावासले गरिरहेको छ । काम छाडेर भागेको, भिसा सकिएकालाई अगस्ट १ देखि मलेसिया सरकारले घर फर्क अभियान सुरु गरेको छ । अभिलेखविहीन कामदारलाई घर फर्काउन दूतावासले पहल गरिरहेको छ । समस्यामा परेका नेपालीको फारम भरिदिने, ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिने तर कामदारको हातमा नदिने गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । ट्राभल डकुमेन्ट पाइसेकालाई यहाँका एजेन्टहरुले समात्ने र म मिलाइदिन्छु भन्ने गरेको पाइएको छ । प्रक्रिया नआउन्जेलसम्म सस्तोमा टिकट दिन्छु, खानबस्न व्यवस्था गरिदिन्छु भनेर एजेन्टहरुले कामदारलाई ठग्ने गरेका छन्् । ट्राभल डकुमेन्टको फोटोकपी कामदारलाई दिने र टिकट किनेर ल्याउन भनेर अध्यागमन विभागका कर्मचारीसमेत गएर त्यहाँ सबै मिलाएर बसबाट दूतावासअघि छाड्ने गरेका छौं । बस खर्चको व्यवस्था दूतावासले गरिरहेको छ । कामदारलाई बिहानै लैजानुपर्ने भएकाले ५ बजेदेखि कर्मचारीले काम गर्नुपरेकाले यहाँ व्ययभार परेको छ । पुत्राजय र सेरेवनमा हामीले विशेष व्यवस्था गरेका छौं । यसले हिजोको जस्तो काम दिन्छु भनेर झुलाउने, काम भएन भनेर एजेन्ट भाग्ने गतिविधि अब लगभग बन्द भइसकेका छन्् । यसरी कामदार ठगिए भन्ने गुनासो आएको छैन । भिसाको म्याद सकिएका १ हजार नेपाली कामदार घर फर्किसकेका छन् । हामीले चाँडो जानुस भनेका छौं ।
भिसाको म्याद सकिएपछि लुकेर काम गरिरहेका नेपाली कामदार कति छन्् ?
हामीले १५ हजार कामदार भएको अनुमान गरेका छौं । तिनलाई कुनै समस्या आएमा हाम्रा अधिकृतले रोजगार कम्पनीसँग डिल गरेर समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपय समाधान भइरहेका छन् । प्रत्येक शुक्रबार फेसबुक लाइभबाट कामदारलाई जानकारी दिने गरेका छौं । यसमा झन्डै ५० हजार कामदारले लाइक गरिसक्नुभएको छ । तत्काल समस्या समाधान गर्न मोबाइल र ल्यान्डलाइन फोनबाट सेवा दिइरहेका छौं । म आएपछि ६ महिनाको अवधिमा १४ ओटा अभिमुखीकरण कार्यक्रम भइसके । टाढा रहेको सावारावागमा पनि अभियान चलाएका छौं । ट्राभल डकुमेन्ट कामदारलाई हुँदै होइन । उहाँहरुलाइ घर पठाउने उपाय हामीसँग छ । उहाँहरु दूतावासमा आएपछि रोजगारदाता कम्पनीसँग कुरा गरेर समस्या समधान गरिदिन्छौं । ३ वर्षका लागि ल्याएको कामदार काम पूरा नगरी भाग्यो भनेर कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग्न सक्छ । कम्पनीका कारण भागेको हो भने हामी भन्न सक्छौं । कम्पनीले टेरेन भने हामी कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछौं । अर्कोपटक तपाईंहरुलाई कामदार दिँदैनौं भन्छौं ।
यस्तै पश्चिम मलेसियाको जोहरबारुदेखि लिएर थाइल्यान्डको बोर्डरसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं । यसले राम्रो परिणाम दिएकाले सबैतिरका नेपाली कामदार दूतावासको सम्पर्कमा छन् । कामदारलाई समस्या आए कानुन व्यवसायीलाई लिएर समस्या समधान गरिरहेका छौं । मृत्युदण्ड पाएका ३ जनाले माफी पाएका छन् । उनीहरुलाई सजाय घटाएर फिर्ता गर्ने काम भएको छ । कुनै कामदार २ महिनाभित्र बढी समयसम्म पक्राउ परेर जेल बस्यो भने त्यसलाई निकाल्ने गरेका छौं । पैसा नहुने कामदारलाई दूतावासले टिकट किनिदिने गरेको छ । अहिलेसम्म ३२ जनालाई टिकट किनेर घर पठाएका छौं ।
धेरैको जिज्ञासा छ, मलेसियामा अवरुद्ध रोजगारी कहिले खुल्छ, मिति नै तोक्न सकिने अवस्था छैन ?
स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाका कारण कामदार आपूर्ति रोकिएको हो । सेप्टेम्बर १० र ११ मा मलेसियामा संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकले गाँठो फुकाउनेछ । त्यसपछि श्रम लिने काम सुरु हुन्छ ।
१५ महिनादेखि कामदार पठाउने काम रोकिएको छ । कुरा के हो ?
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएपछि दुई देशको संयुक्त बैठक बस्यो । त्यही बेला हामीले स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाबारे निर्णय गरेका छौं । मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड नेपाल सरकारलाई पठाउने र सोहीबमोजिम इच्छुक स्वास्थ्य संस्थालाई बोलाउने र छनेट गरेर परीक्षण अनुमति दिने भन्ने कुरा भएको थियो । नेपालले मापदण्ड पठायो । तर मलेसियामा ढिलाइ हुन गयो । फेरि मलेसिया दूतावासले पुरानै मापदण्ड भन्यो । हामीले पुनः मापदण्ड बनायौं । मापदण्ड पठाएपछि त्यहाँ समय लाग्यो । भर्खरै केही दिनअघि नेपालले मलेसियालाई १ सउ २२ ओटा अवधारणा पठाएको छ । थप स्वास्थ्य संस्थालाई पनि सामेल गर्नुपर्यो भनेको छौं । संयुक्त कार्यसमितको बैठकमा नेपालले कुरा उठाउनेछ ।
भीएलएन, ओईसी, आईएससीका विषयमा के हुन्छ ?
अनावश्यक संस्था थपेर श्रमिकमाथि व्ययभार बढाउनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । एमओयूको व्यवस्थाअनुसार यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले स्वास्थ्य परीक्षणको भुक्तानी गर्ने भनेपछि रोजगारीमा जानेलाई व्ययभार पर्दैन । लिने देशले पनि सबै यहाँ कम्पनीले पैसा तिर्छन भनेपछि हामीले त्यसमा अडान लिइरहनुपर्ने कुनै कारण छैन । यस्ता बिचौलिया संस्था नआऊन् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामीले १२२ ओटा स्वास्थ्य संस्थाको विवरण दिएका छौं । ३६ ओटा पुराना र काम गरिरहेका संस्था हुन् भने त्यहाँबाट काम सुरु गर्दै थप सरकारबाट मूल्याङ्कनले थपघट गर्न सक्छौं । थप संस्थाको मूल्याङ्कन गर्न हामी तयार छौं भनेर मेलेसिया सरकारले पत्र पठाएको छ । सहमति के हुन्छ हेर्न बाँकी छ । समावेश गर्ने सङ्केत मलेसियाले गरेको छ ।
उसो भए मलेसिया रोजगारी छिट्टै खुल्छ ?
दुई देशको संयुक्त कार्यसमूहको बैठकपछि मलेसियामा कामदार खुल्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । १५ महिनाबीच नेपालबाट आउँदै आएनन् भन्ने कुरा भएको छ, यो गलत हो । कलिङ भिसालाई टेकेर उल्लेख्य संख्यामा नेपाली कामदार मलेसिया आएका छन् । कामदार मलेसिया आउने क्रम गत वर्षको तुलनामा कम छ । त्यस्तो धेरै कम पनि होइन । कसरी आए आफ्नो कुरा हो । तर कामदार नेपालबाट आएका छन् । दोस्रो कुरा रोकिएपछि नेपाल कामदार आउन घटेको होइन, सन् २०१४ र ०१५ मा नेपाली जति आएका थिए, त्यसपछि धेरै घटको छ । २०१० पछि ह्वात्तै बढेको थियो । वार्षिक २ लाख नेपाली मलेसिया आएका थिए । १५ महिनामा ४२ हजार नेपाली कामदार विभिन्न च्यानलको प्रयोग गरेर मलेसिया पुगेका छन् । यीमध्ये केही बिदाबाट आएका छन् । कामदार अहिले आइरहेका छन् । कुनै दिन ६०० जना कामदार मलेसिया आइरहेका छन् । कलिङ भिसालाई मिलाएर आएका छन् । श्रम स्वीकृति लिएर आएका छन् । कसरी आएका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं । बाहिर बताउन नमिल्ने भएकाले हो ।
मलेसियाले वृक्षरोपण (प्लान्टेसन) का लागि नेपाली कामदारको माग गरेको छ भन्नुभयो, कति कामदार चाहिएको छ ?
मलेसियन कम्पनीहरुले प्लान्टेसनका लागि दुई किसिमका कामका लागि नेपाली कामदार उपलब्ध गराउन भनेका छन् । हाल रहेको जङ्गल फडानी गरेर वृक्षरोपण गर्ने, रुख स्याहार्ने र फल टिप्ने काम छ । यस्तै प्लाइउड कारखाना र अन्य काठसँग सम्बन्धित व्यवसायीले सरकारबाट जमिन लिने, काठ हुर्काउने र प्रयोग गर्ने र एक ठाउँमा रुख काट्दै र अर्को स्थानमा रोप्ने काम जारी रहन्छ । उनीहरुले नियमित रोप्ने, हुर्काउने र काट्ने काम गर्नुपर्छ । यस्तो कामका लागि यहाँबाट कामदारको बढी माग आएको छ । यसका लागि मलेसियन कम्पनी कुरा गर्न दूतावासमा आइरहेका छन् । हाल मलेसियामा कामदार पठाउने काम बन्द रहेकाले प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन । हामीले १५ हजार कामदार भएको अनुमान गरेका छौं । तिनलाई कुनै समस्या आएमा हाम्रा अधिकृतले रोजगार कम्पनीसँग डिल गरेर समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपय समाधान भइरहेका छन् । प्रत्येक शुक्रबार फेसबुक लाइभबाट कामदारलाई जानकारी दिने गरेका छौं । यसमा झन्डै ५० हजार कामदारले लाइक गरिसक्नुभएको छ । तत्काल समस्या समाधान गर्न मोबाइल र ल्यान्डलाइन फोनबाट सेवा दिइरहेका छौं । म आएपछि ६ महिनाको अवधिमा १४ ओटा अभिमुखीकरण कार्यक्रम भइसके ।
मलेसियाको सारावाक राज्यका मुख्यमन्त्रीका कार्यालयका प्रतिनिधि आएका थिए । ३८ हजार कामदार अपुग भएकाले तपाईंहरुले पठाउनुहुन्छ भने हामी लिन्छांै भनेका छन् । रोजगार स्रोत मुलुकका हिसाबले पहिला इन्डोनेसिया, दोस्रोमा बङ्गलादेश र तेस्रोमा नेपाली कामदार मलेसियामा कार्यरत छन् । सुरक्षामा मलेसियन र नेपाली मात्र छन् । मलेसियाले कामदार आपूर्ति चाँडो खुलिदिए हुन्थ्यो भनिरहेको छ । काम गर्नेको सम्झौता नवीकरण भइरहेको छ । नेपालबाट चाँडो आउँछ भन्नेमा मलेसियन ढुक्क छन् । १५ महिनादेखि कुनै क्षेत्रमा पनि मलेसियाले नेपाली कामदार लिएको छैन ।
यहाँले साउदी अरेबियामा पनि राजदूतका रुपमा काम गरिसक्नुभएको छ । के फरक पाउनु भयो ?
हामीले कूटनीतिक नियोगमा काम गर्न आएपछि दुई देशबीच तुलना गर्न मिल्दैन । नेपालीको अवस्था के हो भने नेपालीको ठूलो सङ्ख्या दक्षता नभई रोजगारीमा गइरहेको छ । यो ठूलो समस्या हो । शैक्षिक स्तर पनि न्यून हुने र सीप पनि नसिकी रोजगारीमा जाने गरेका छन् । हामी साधारण श्रमिकका रुपमा गइरहेका छौं । बढी दुःख गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो किसिमको काममा जाँदा यस्तो भएको छ । खाडी र मलेसियामा नेपाली कामदार बढी गएका छन् । ज्ञान र सीपको अभावले समस्या आएको हो ।
डिसेम्बरसम्म भिसा सकिएको र लुकेर बसेका कामदार नेपाल फर्किने सम्भावना कत्तिको छ ?
हामीले पटकपटक भनिरहेका छौं । उहाँहरुको परिवारलाई समेत अनुरोध गरेका छौं । नेपालमा सूचना पनि प्रकाशित गरेका छौं । नगएमा समय सकिनेबित्तिकै पक्राउ पर्यो भने ५ वर्ष नाघेको कामदार छ भने १० हजार रिङ्गिट जरिवाना र २ वर्ष जेल बस्नुपर्छ । यस्तो जोखिम नमोल्न हामीले उहाँहरुलाई अनुरोध गरेका छौं । मलेसियामा रहेका नेपाली समुदायलाई घर फर्कन पे्ररित गरेका छौं । नेपाली कामदार बढी भएको जोहरबारु र पेनाङमा दूतावासका कर्मचारी गएर सुझाव दिइरहेका छन् । डिसेम्बरसम्म भिसाको म्याद सकिएका नेपाली कामदार नफर्किए ठूलो समस्या आउँछ । त्यसले उहाँहरुले धेरै दुःख पाउनुुहुनेछ । जनवरीदेखि प्रहरीले पक्राउ गर्नेछ । प्रहरीले पक्रिएपछि कामदार जेल बस्नैपर्छ । कति समय भिसा सकिएर बसेका छन्, त्यही आधारमा जरिवाना हुन्छ ।
दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट नदिएका कारण कामदारलाई समस्या भएको भन्ने गुनासो गरेका छन् । किन नदिएको ?
ट्राभल डकुमेन्ट कामदारलाई हुँदै होइन । उहाँहरुलाइ घर पठाउने उपाय हामीसँग छ । उहाँहरु दूतावासमा आएपछि रोजगारदाता कम्पनीसँग कुरा गरेर समस्या समधान गरिदिन्छौं । ३ वर्षका लागि ल्याएको कामदार काम पूरा नगरी भाग्यो भनेर कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग्न सक्छ । कम्पनीका कारण भागेको हो भने हामी भन्न सक्छौं । कम्पनीले टेरेन भने हामी कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछौं । अर्को पटक तपाईंहरुलाई कामदार दिँदैनौं भन्छौं । भोलि नेपालबाट कामदार ल्याउन चाहने कम्पनीले समस्या समाधान गर्छन् । यहाँ एजेन्टहरु बलिया छन् । उनीहरुले हजारौं नेपालीसँग पैसा लिएर गलत काम गरेका छन् । त्यही कारणले रोजगारदाताले नेपाली कामदारको पासपोर्ट लिने र समयमा तलब नदिने गरेका छन् । समस्या छ भने हामी समाधान गरिदिन्छौं । भएन भने नेपालको म्यानपावर व्यवसायीलाई भन्छौं । कसैगरी समाधान निकाल्छौं । साउदीमा पनि यस्तो थियो, समाधान गर्यौ । यो एजेन्ट प्रोत्साहित गर्ने तर्क हो । घरफिर्ती कार्यक्रममा दलाललाई प्रवेश दिदैनौं । भएमा हामी प्रहरीलाई खबर गरिदिन्छौं । प्रहरीसँग पनि हाम्रो कुरा भइसकको छ । पक्रेर थुन्नेछौं, यसमा कुनै मोलाहिजा हुँदैन । मलेसिया खुलेपछि कस्ता एजेन्ट आउँछन्, हेर्नुपर्छ ।
यहाँ राजदूत भएर आएपछि नेपालमा लगानी गर्न मलेसियाका व्यवसायीलाई कसरी प्रेरित गर्नुभयो ?
यसबीचमा हामीले विश्व बैङ्कसँग मिलेर कार्यक्रम आयोजना गरेका छौं । लगानी सम्मेलनपछि यो कुरा नेपाली व्यवसायीलाई प्रेरित गराएका थियौं । सरकारबाट पनि सहयोग भयो । नेपालको अहिलेको अवस्था र लगानीको विषयमा कुरा गरेका छौं । मलेसियनहरुले नेपाल मलेसिया चेम्बर अफ कमर्स गठन गरेका छन् । उनीहरुसँग लगानीका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । केही दिनपछि उनीहरुको टोली नेपाल जाँदै छ । जलविद्युत, पर्यटन र अग्र्यानिक कृषि उत्पादनमा लगानी गर्न लगानीयोग्य क्षेत्र हामीले दिएका छौं । केहीले हर्बलमा लगानी गरेका छन् । टेलिकममा आजिएटाको लगानी पनि छ । ६२ मेगावाटको दार्चुलाको चमेलियामा लगानी गर्न मलेसियन इच्छुक छन् । यस विषयमा छलफल अघि बढेको छ ।